Sawirro: Ciidamo kala eryey shacab dhigayey dibad-bax ka dhan ah FARMAAJO - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Ciidamo kala eryey shacab dhigayey dibad-bax ka dhan ah FARMAAJO
Sawirro: Ciidamo kala eryey shacab dhigayey dibad-bax ka dhan ah FARMAAJO
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta kala eryey dad shacab ah oo isku soo baxay qeybo ka mid ah degmada Hodan ee Muqdisho, si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan dalka.
Dadweynahan ayaa dhigayey dibad-bax looga soo horjeedo madaxweynihii hore Maxamed Farmaajo, gaar ahaan tallaabad isku dayga Afgembi oo uu qaaday, balse guul darreystay, waxaana kala dareeriyey ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dibad-baxa ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaan siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka, sida Axmed Macalin Fiqi oo kasoo muuqday banaanbaxa oo sidoo kale lagu taageerayey Rooble.
Axmed Macallin Fiqi oo ka hadlay tallaabada ay qaadeen ciidamada ayaa sheegay in amarka lagu joojiyey dibad-baxooda uu ka so baxay taliye ku xigeenka Booliska Soomaaliyaiyo taliyaha qeybta Booliska ee gobolka Banaadir.
“Askar ay soo direen taliye ku xigeenka Booliska Kaniif iyo taliyaha gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la ii sheegayaa in ay is hor istaag ku sameeyeen shacab banaanbax si nabadgalyo ah u samaynayey degmada Hodan oo aan qeybtaysii hore aan goobjoog ka ahaa,” ayuu yiri siyaasiga caanka ah ee Axmed Macallin Fiqi.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray ” Waxaa muuqata nimankaas in weli la shaqaynayaan rajiimkii waqtigu ka dhamaada, ayna dhegaha ka furaysteen baaqii raysulwasaaraha,”.
Dhankiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay arrintan, wuxuuna farriin u diray ra’iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur.
“Dibadbax looga soo horjeedo afgambigii Farmaajo, ayaa waxaa hor istaagay Farxaan Qaroole iyo Kaniif. Raysalwasaaraha Rooble iyo Wasiirkiisa amniga waxaan ka codsanaynaa in ay dadka ka horwareejiyaan haraadiga kaligii takiska,” ayuu yiri CC Shakuur Warsame.
Muqdisho ayaa waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran, taas oo ka dhalatay khilaafka u dhexeeya Farmaaho iyo Rooble oo saameeyey doorashooyinka dalka.